Friday August 09, 2019 - 11:42:10 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Kulan loogu duceynayo Allaha u naxariistee Gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow oo ahaana Duqii magaalada Muqdisho ayaa saaka ka biloowday garoonka Banaadir.
Kulankaan ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxda ugu sareysa dalka, xildhibaano, Wasiiro iyo Qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Khudbad ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay xasuusan doonto geesinimadii Yariisow ee Adeegga bulshadda.
Waxaa uu sheegay Madaxweyne Farmaajo in Garoonka Kubadda Cagta ee Banaadir loogu maga daray Cabdiraxmaan Yariisow.
"Waxaan ugu magacdarnay C/raxmaan Yariisow Garoonkan Kubadda Cagta, naftiisa ayuu u huray dalka, qofka kasta oo Halyey ah oo dalkaan wax ku kordhiya sidaas ayaa u xasuusaneynaa” ayuu yiri Wari Madaxweyne Farmaajo.